डण्डीफोरले हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
डण्डीफोरले हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस
बिहिबार १९असोज २०७४ इटहरी न्युजडेस्क-
डण्डीफोर आम नागरीक समस्याकै रुपमा देखीन्छ। यसले अनुहारको सुन्दरता बिग्रन्छ कि भनेर मानिसहरु निकै चिन्तित हुन स्वभाविक पनि हो। डण्डीफोर निको भएपनि दागको रुपमा यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ।
डण्डीफोरलाई चाँडो निको बनाउने धुनमा त्यसलाई निचोर्नु नै समस्या निम्त्याउनु हो। फेरि त्यसको दागलाई हटाउने नाममा प्रयोग गरिने क्रिमले छालामा साइडइफेक्ट गर्नसक्छ। यहाँ डण्डीफोर हटाउने घरेलु उपायको यहाँ चर्चा गरिएको छ।
१) आयल र ओलिभ आयल :-
आयल र ओलिभ आयलको केही थोपा डण्डीफोरको दागमा लगाउनुस। यसले अनुहारको रगतमा निखार ल्याउँछ र दाग फिका हुन थाल्छ। नियमित लगाउन थालेपछि बिस्तारै दाग हट्दै जान्छ।
२) आलुको टुक्रा :-
आलुको टुक्रा काट्नुस् र अनुहारमा बिस्तारै रगडेर लगाउनुस। एउटा टुक्रा सुक्यो भने अर्को लगाउनुस। यो क्रमलाई १५ मिनेटसम्म निरन्तरता दिएपछि अनहारलाई सुक्नदिनुस। त्यसपछि धोएर मोस्चराइजर लगाउनुस। यो प्रयोग हप्तामा ३–४ पटक गर्नुहोस।
३) कागतीको रस :-
कागतीको रस डण्डीफोरको दागमा कागतीको रस लगाउनुस र सुक्न दिनुहोस। त्यसपछि पानीले धुनुस। यो प्रयोग साँझमात्र गर्न सक्नुहुन्छ। दिउँसो कागतीको रस लगाउने हो भने सन स्क्रीन लोसन अवश्य लगाउनुहोस।
४)खाने सोडा :-
खाने सोडा र फेसवासमा एक चिम्टी खाने सोडा मिसाएर लगाउनुस र चिसो पानीले अनुहार धुनुस। यसबाट छालामा थोरै झनझनाहट हुन्छ। छालाका क्लिनिकमा छालामा चमक ल्याउन यो उपाय अपनाइन्छ। तर यसलाई अनुहारमा २० सेकेण्डभन्दा बढी नराख्नुस।
१९ आश्विन २०७४, बिहीबार ०८:५७ मा प्रकाशित
यात्रा अघि अदुवा हालेको चिया पिउँदा के हुन्छ ?
नियमीत यौनसम्पर्क गरे यस्ता रोग लाग्दैन
कार्यक्रम हाम्रो इटहरी राम्रो इटहरीमा मेयर द्वारिकलाल चौधरी
रातभर मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्नुहुन्छ ?
बिहे अघि सोध्नुहोस युवतीलाई यि पाँच प्रश्न
Radio Purbodaya FM 90.4 Mzh
ठेगाना : इटहरी सुनसरी, पश्चिम लाईन सम्पर्क : ०२५-५८७३२८